Musqulaha 2-Gacanta Sare ee Arc-ga Sare ee Qubeyska
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / Qulqulka 2-Gacanta-Arc-Weelka Sare ee Qubeyska Weyn ee Qulqulka Chrome
Qolka Qubayska Qubayska Wejiga 2-Gacan Weyn ee Qulqulka Fog Chrome
qiimeeyay 5.00 out of 5 ku salaysan 25 ratings macaamiisha
(25 dib u eegista macaamiisha)
Sare u qaadida muuqaalka musqushaada oo leh naqshad faahfaahsan oo faahfaahsan, Labada Gacan-garowga Nadiifiya ee Nickel Musqusha Sink Faucet ayaa ku siin doona qurxinta musqushaada waqti-darro.
2321300C tilmaamaha rakibaadda
Xulo dal Åland IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaJacaylkuAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Saint Eustatius iyo SabaBosnia iyo HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilTerritory British Indian OceanBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileShiinahaChristmas IslandCocos (rukuucda) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkJabuutiDominikaDominican RepublicEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaItoobiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFaransiis PolynesiaFaransiis Southern DhulalkaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiIsland maqlo iyo McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandHindiyaIndonesiaIiraanCiraaqIrelandIsle of ManIsraa'iilItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyUrdunKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandKuuriyada waqooyiWaqooyiga MakedoniyaNorthern Mariana IslandsNorwayCumaanPakistanTerritory FalastiiniyiintaPanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQadarReunionRomaniaRussiaRwandaSao Tome iyo PrincipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (qayb Dutch)Saint Martin (qayb Faransiis)Saint Pierre iyo MiquelonSaint Vincent iyo Grenadines ahSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSouth Georgia / Islands SandiwiijSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard iyo Jan MayenSwazilandIswidhanSwitzerlandSuuriyaTaiwanTajikistanTansaaniyaThailandTimor Leste-TogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurkiga oo Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Kingdom (UK)United States (US)United States (US) Islands Fogfog YarUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamIslands Virgin (British)Islands Virgin (US)Wallis iyo FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Khariidad tayo sare leh oo heer sare ah oo heer sare ah oo heer sare ah: tubada musqusha adag ee birta ah oo aan fiicnayn 2321300C. Dhamaadka Chrome wuxuu hor istaagi karaa daxalka. Kaabsalka sare ee dhoobada dhoobada ah iyo koronto badbaadinta neoperl. Labalaab gacanta ku haynta qulqulka sahlan iyo xakameynta heerkulka biyaha. (fadlan qiimee cabbirka saxankaaga ka hor dalbashada)
hal abuur, teknoolojiyad isku xira dhakhso leh: dhisida isku xirka dhakhsaha leh ee isku xidhka degdega ah waa mid sahlan oo lagu rakibi karo nafsaddaada oo aan lahayn tuubbo-weyne. Ku keydi lacag bixinta rakibaadda tuubada xaabada. Booska ayaa lagu hagaajin karaa shuruudahaaga dhabta ah. Waxay ku habboon tahay guri kiro, guri cusub, aqal keliya, aqal mooto, tareenada safarka iyo isticmaalka guriga.
Labaji maareyn u dejinta qulqulka sahlan iyo xakameynta heerkulka biyaha. Waxay ku habboon tahay guri kiro, guri cusub, aqal keliya, aqal mooto, tareenada safarka iyo isticmaalka guriga.
SKU: 2321300C Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: tubooyinka musqulaha, xamili baahsan, barafoobay dhalaalaya
Waxaan iibsaday qasabaddan badanaa maxaa yeelay waxay ka mid ahayd kuwa ugu raqiisan nooceeda, laakiin sahlanaanta rakibidda ayaa ah sababta aan mar labaad u iibsan lahaa. Ka dib markii la rakibo qalabka, waxaa lagu adkeeyay boolal lagu dhejiyay lowska halkii si toos ah loogu adkeyn lahaa lowska, taas oo meesha ka saareysa xanuunka isku dayga ah inaad isku beddesho barar gacanta lagu haayo oo dheer oo ku yaal qeybaha ciriiriga ah ee hoosta saxanka hoostiisa. Sidoo kale, tuubadu uma baahna maroojin ama maroojin lagu dhejiyo, laakiin si fudud ayey u qabsataa jadwalka.
Kaliya nitpicks-kayga ayaa ah in qaybta bullaacadu aysan ka fududayn rakibisteeda wax kasta oo kale, iyo in caaga tuubbada ee caagaga ahi u muuqato inay xoogaa jaban tahay oo ay u nugul tahay inuu xirto oo uu dhawr sano xarigga ka jaro, laakiin wax waliba way fiican yihiin hadda . Xaqiiqdii waxaan kugula talinayaa tan fududaynta rakibida kaligeed.
Waxaan haystay miiska dusha sare ee dib-u-soo-baxa oo waxaan raadinayay hab dhaqaale oo aan ku qurxiyo musqusha. Tubooyinkaasi waxay ahaayeen xulasho aad u wanaagsan. Way fududahay in la rakibo oo si qurux badan loo shaqeeyo. Koolarka asluubta ee asalka ahaa wuxuu u weynaa saxankeyga si ay biyaha oo dhan ugu oggolaadaan inay si habboon u daataan. Waan ogeysiiyay iyaga waxayna ii soo direen bedello yaryar. Badeecadani waa qiimo aad u fiican adeeggooduna waa mid gaar ah.
Kani waa bedelka qasabada wanaagsan ee musqusha qubayskayga. Waxay leedahay qaab jilicsan oo nadiif ah. Waxaan filayay in gacmaha ay waxyar ka dheeraan doonaan, laakiin markii aan dhowr jeer isticmaalay, waxay umuuqdaan inay sax yihiin. Ninkaygu si fudud ayuu wax walba u rakibay. Ma aanan hubin wax ku saabsan muuqaalka bullaacadda, laakiin dhab ahaantii waan jeclahay inay ka fiican tahay nooca kabaalka dheecaanka hore. Kaliya waxay haysaa wax walba oo fudud oo muuqaal ah. Waxaan haystaa dhameystirka chrome dhalaalaya waana jeclahay. Qiimuhu aad ayuu uga qiimo jabanaa kuwa kale ee aan eegay. Waxaan rajeynayaa inaan ku raaxeysto tan muddo dheer.
Waxaan dhigeynaa 2 nooc oo kuwan ka mid ah musqusha sayidkeena. Gacanku wuxuu u shaqeeyaa si habsami leh. Waxay dareemayaan oo u muuqdaan kuwo fiican. Waxay labanlaab ka ahaan lahaayeen Lowes, iwm.
Tuubada ayaa lagu keenay waqtigeeda waxayna ahayd mid aad u fudud in la rakibo. Waxay igu qaadatay waqti dheeri ah inaan ka saaro tii hore intii aan rakibo tuubada cusub.
Tuubadaani waxaa loogu talagalay musqusha qolka jiifka. Waxaan aad ula dhacnay tayada sheyga qiimaha
Tuubada biyaha lagu dhaqo waxaa lagu sameeyay tayo aad u sareysa. Waxay u egtahay mid culus sida magac sumcad qaali ah. Wuxuu la yimaadaa dhammaan qaybaha loo baahan yahay rakibidda. Hadday rakibtay usbuucii la soo dhaafay oo si fiican u shaqeynaya illaa hadda! Waan cusbooneysiin doonaa haddii wax uun is beddelaan.
Tuubadaani waa qurux badan tahay! Waa tayo aad u fiican oo si fiican u shaqeysa! Kicinta ayaa igu wareertay xoogaa laakiin wali waan awoodaa inaan sii rakibo!
Waan jeclahay qasabaddan! Ma aanan ogeyn markii aan amrayay in xuubku wareegi karo, taas oo ah hanti runtii waxtar leh!
Jeclow qasabadda cusub ee loogu talagalay musqushayada cusub ee dib loo cusbooneysiiyay! Aad casri ah oo jilicsan.
Waan jeclahay qasabadani. Runtii waxaan iibsaday labo oo labaduba waxay kujiraan qolal musqulo qaabab kala duwan ah. Waa mid la awoodi karo oo adag. Qulqulka qulqulka ayaa si fiican u shaqeynaya waana fududahay in la rakibo. Way fududahay in la nadiifiyo oo aad soo jiidasho leh!
Macno ahaan xitaa madaxayga kuma duubi karo qiimaha tuubada iyo sida quruxda iyo quruxda badan ee ay umuuqato. Waxaan ku eegaynay kuwa lamid ah Home Depot iyo Lowe's in kabadan laba jibaar qiimaha. Kani waa qasabaddii ugu horreysay ee waligay aan rakibo oo waxay ahayd wax lagu qoslo si dhakhso leh. Qaybta ugu adag ayaa ah inay isha ku dhufato wax walba ayna hubiso in saddexda qaybood ay si fiican isugu toosan yihiin. Waxay kuxirantahay dhererka xariiqa aad isticmaaleyso waad isku xiri kartaa kuwa kahor intaadan kululeynin kuleylka ama qabowga meesha, kaliya hubi inaad heysato qeybaha si aad ugu adkeyso. Runtii anigu kama dhihi karo waxyaabo waaweyn oo ku filan tan. Waa heshiis weyn oo 100% u qalma dinaar kasta !!
Waxaan dhawaan iibsaday & rakibay qasabadani qayb ka mid ah dib u habeynta musqusha. Aad ayaan ugu faraxsanahay go'aankeyga ah inaan ku iibsado sumaddan / noockan kuwa kale ee aan eegay oo aan tixgeliyey. Tuubada waa muuqaal xarrago leh, waxay u shaqeysaa si bilaa cillad ah waxaana si fiican looga fikiraa 'qaabkeeda iyo dhismeheeda. Khadadka isku xirka degdega ah waa dhab lagu daray oo fududeeyay rakibidda. Ma aanan la kulmin wax daadasho ama dhibaatooyin ah intii lagu jiray rakibidda, iyo tan iyo markii aan bilaabay isticmaalka qasabadda. In kasta oo biyo-shubis la diyaariyay, maaddaama musqushaan maalin walba la isticmaalo, waxaan doortay marin-biyood kale oo leh dambiil qabasho dhaqso ah oo nadiif ah laga saari karo. Waxaan qorsheynayaa inaan ku rakibo pop-up-ka musqusha kale ee aan la isticmaalin mustaqbalka dhow.
Kuwani waxay u muuqdaan kuwo ku fiican musqulaha. Waxaan ku badalnay isku dheelitirkeenii hore ee 1978 kuwan oo kala duwanaashaha waa wax aan la rumeysan karin. Cadaadisku wuxuu dareemayaa xoog, qaanso-dheerkuna wuxuu sahlayaa in waxyaabaha la hoos dhigo saxanka. Fududeynta rakibida ayaa sidoo kale iga dhigtay inaan jeclahay qasabadaha biyaha xira.
Moen-kii hore ee musqusha banaanka ayaa ku baxay oo bilaabay daadinta- wixii dayactir ka baxsan. U baahday bedel aan qaali ahayn. Waxaan ka walwalayay midkan, maxaa yeelay qiimihiisu wuu hooseeyay. Si farxad leh ayaan ula yaabay markay timid. Waxay umuuqataa mid hagaagsan tilmaamuhuna way sahlanaayeen in la raaco waana sahal in la rakibo (xitaa markii aan lahaa bisad igu boodaya hareerahayga). Xitaa waxaan email ka helay WOWOW si aan u hubiyo inay aniga ila shaqaysay. Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsashada
Markii aan furay xirmada weyn fekerkeygii uhoreeyay wuxuu hubsaday inuu yahay daahir, dhammeyn weyn, isku xirnaanta naxaas adag, oo aad u fudud went anigoo leh tan tan kaliya waxay ku jirtay toddobaad gudihiis sidaa darteed khibrad uma lahan cimri dhererkeeda, laakiin illaa iyo hadda waan jeclahay
Waan ka shakisanahay markii aan dalbanayay tan qiimaha darteed. Waxaan dalbaday 2 nooc oo sayidkayga qubeyska ah. Mid aad u fiican!! Waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo adag. Tuubbadeyda ayaa aad ula dhacday. Laga bilaabo hada waxaan si weyn ugu talin lahaa!
Tani waxay ahayd in lagu beddelo qasabaddii musqusha ee hore. Ma aanan fileynin kulan sidan u qurux badan! Qiimuhu aad ayuu u fiicnaa, sidaa darteed aad baan ugu faraxsanahay. Rakiibintu waxay ahayd neecaw. Waqti ma qaadan in lagu soo dhex muujiyo. Waxay qaadatay waqti dheeri ah in la soo saaro tii hore. Tani waa iibsi weyn!
Waa ans quruxsan si fudud loo rakibo. Waan jeclahay jaantuska ku jira sharraxa alaabta, taasi waxay i siineysaa kalsooni ah inay ku habboon tahay qaybo ka mid ah tuubooyinka jira ee musqusha. Waxayna u shaqaysaa sidii la filayay. Aragtida guud waa qumman tahay.
Waxaan soo iibsannay qasabaddan musqusha halkii aan ka iibsan lahayn Moen ama Delta sababo la xiriira farqiga u dhexeeya iyo ilaa iyo hadda oo aad u wanaagsan. Waa qasabad aad u qurux badan oo si fiican u shaqeyneysa ilaa hadda.
Aad baan ula dhacay tayada iyo dhammaadka tuubadan. Sida fiican haddii aysan ka fiicnayn noocyada magacyada waaweyn ee ka jaban.
Iibsaday qasabadani badal ahaan. Si fudud loo rakibo. Waxay leedahay muuqaal fiican oo casri ah. Si fudud loo nadiifiyo. Qaybaha gudaha waa naxaas. Jacaylka pop up bullaacadda. Ninkaygu wuxuu yidhi way ka fiicantahay dhismaha qasabaddeenii hore ee qaaliga ahayd.
Ku rakibay laba qasabadood saacad gudaheed. Waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican. Jacayl joojiyaha riixista ayaa lagu daray iyo khadadka biyo bixinta. Illaa iyo hadda sheygan ayaa qiimo wanaagsan ugu fadhiya lacagtaada
Jeclow habka ay kuwani u egyihiin! Wuxuu musqusha ka dhigayaa mid qurux badan. Aad u fududahay in la rakibo oo leh muuqaal jilicsan oo ka dhigaya inay fududahay in la nadiifiyo. Hawl aad u siman iyo qulqulka biyaha oo weyn.
Horumar weyn oo ku saabsan qaabeynta hadda jirta ee lagu iibsaday guriga. Qalabka hore wuxuu ku kacay wax ka badan $ 120 meelaha hoose / bakhaarka guriga. Qaabkani wuxuu u oggolaanayaa socodka biyaha wanaagsan, qaybaha cusub iyo rakibidda fudud ee qiime aad u macquul ah. Tayada ayaa u muuqata mid weyn!
WOWOW Musqul Sink Faucet 4 Inch Center oil Ru ...
La iibiyey: 15
WOWOW Matte Black-Handle Gacanta Labaad ee Balaadhan ...
WOWOW Top Rated Down Jiijooyinka Qufulka Kaliya Kaliya USD59.98